Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software]
1 Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software] on 17th July 2010, 10:18 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 166
တညျနရော : MM
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-16
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 46
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 284
ကျတော် IDM 5.20 လေး ကို တင်ပေးသွားပါမယ်
သူကတော့ သိပ်မကြာသေးပါဘူး ထွက်တာပါ
အသုံးဝင်မယ် ထင်တာတွေ ကို မလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲ ပိုင်းလေးတွေ ကို လည်း
Adimin နဲ့ Moderator တွေ က ရှာပေးကြမှာ ပါ ကျတော်လည်း
ဖိုရမ်ထဲ့မှာ ဂှိတဲ့ ချိန် နဲ့တွေ့ရင်တော့ တန်းတင်ပေးနိင်မယ်
ကျတော့ ကွန်နက် ရှင်က အရမ်းကောင်းတော့
ကဲံ ခုတော့ Internet Download Manager 5.20
ကို အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ [You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
ဒီမှာ Down ပါ။
ညီလေးက ဖိုရမ်မှာ ရောက်ကတည်းက စာတွေ လည်း လိုက်ရေးတယ်
ဆော့ဝဲတွေ လည်း တင်နေတော့
ကျတော့ကို တင်းနေကြပီလားမသိဘူး တော်တော် ရူပ်တယ် ဆိုပီးတော့လေး
Last edited by ထက်နိုင် on 18th July 2010, 8:43 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : adding tag)
2 Re: Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software] on 17th July 2010, 10:51 am
IDM လေး တငျပေးပီး မှ သတိရတယျ ဗြာ
ဒီဆိုဒျကလေး တဆိူဒျကို ညှနျးခငျြတယျ ဗြာ
FULL version +Serial+Crack
တနရောလေး က နေ အကုနျရနိငျပါတယျ
ရှာတော့ ရှာ ရမယျနျော
မိမိလိုခငျြတာ ကို ပေါ့ လေ အောကျက လငျ့လေး (3)လငျ့မှာ သှားကွညျ့လိုကျပါဦး
3 Re: Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software] on 17th July 2010, 11:48 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 581
တညျနရော : Nay Pyi Taw
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 49
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1281
အခုလိူ အားတက်တေ၇ာ ဆောင်ရွက်ပေးတာကို MITR ကိုယ်စား
လင့်တွေ Dwonload လင့်တွေတင်တဲ့အခါမှာ Code ခံပြီးရေးသားပေးပါခင်ဗျာ
4 Re: Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software] on 18th July 2010, 1:41 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 50
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 12
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 127
5 Re: Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software] on 19th July 2010, 2:15 pm
ကျတော် နောက်ထပ် ဒေါင်းလုပ်လင့် ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
အပေါ်လင့်ပျက်ရင် အောက်က လင့်နဲ့ ရအောင်လို့ပါ
အောက်ကတော့ 5.19.3 ပါ
6 Re: Internet Download Manager လိုခငျြသူမြားအတှကျ [Software]